Uyifaka njani iStumbleUpon's StumbleBar
NguSteve Olenski, uNick Robinson
IStumbleUpon ibonelela ngesixhobo esikhulu sokugcina ixesha kwiStumbleBar yayo, onokuyifaka njengokongeza kwisikhangeli sakho. Sukuba nexhala, kuba unokukhetha isikhangeli esithile se-Intanethi, kukho imiyalelo elula yendlela yokufaka iStumbleBar kwiChannel nakwiFirefox.
Ngelishwa lakho kubasebenzisi beMac Safari, iStumbleUpon ayixhasi iStumbleBar yeSafari okwangoku.
Yalatha isikhangeli sakho esikwi-Intanethi Ukhuphelo lweStumbleUpon . Uya kubuliswa ngephepha elikunika iindlela ezininzi zokukhuphela i-StumbleBar, nganye eyenzelwe isikhangeli esithile.
Uyenza njani inqaku kwiqhosha leStumbleUpon
Izinto zokuqala kuqala. Ukugcina ixesha, uya kufuna ukutsala ikhonkco elikhethekileyo kwi-Stumble kwi-bookmark ye-bookmark yesixhobo sakho. (Ixesha le-Intanethi lonxibelelwano olukhethekileyo ngu ibhukumaka , ke le uyenzayo yile uphawu lokubhukisha Ukukhubeka ekusebenziseni kamva.)
Kwiphepha lokhuphelo lweStumbleUpon, uya kuqaphela ukuba into yokuqala yokukhuphela kuluhlu yikhonkco lebhukumaka kwiStumbleUpon. Tsala nje i-hyperlink-enamagama, ngokufanelekileyo iStumbleUpon-kwibar yeKhaya lencwadi yesikhangeli sakho se-Intanethi.
Kwi-IE10 kwiWindows 8, ibha yamanqaku eBhukumaka ibizwa ngokuba ziiFavorites kwaye ifihlwe ngokwakhona. Uya kudinga ukwenza isixhobo seFavorites.
Emva kokuba ubeke ngempumelelo iStumbleUpon kwi-browser yakho yeebhukhimakhi yesixhobo, konke okufuneka ukwenze kukucofa iqhosha kwaye ngokuzenzekelayo Uyakhubeka.
Uyifaka njani iStumbleBar yeChannel
Kulungile, uneli qhosha litsha likaStumbleUpon kwibar yesixhobo seBhukumaki yakho. Ngoku lixesha lokuba umsebenzi wokwenyani ufake iStumbleBar. Ukuba isikhangeli sakho esikhethiweyo sisikhangeli se-Chrome kwaye ufuna ukwenza konke ukukhubeka usebenzisa iStumbleBar yeChannel, yiya kwakhona Ukhuphelo lweStumbleUpon kwaye ucofe ukhuphelo lweLinki yolwandiso phantsi kweStumbleBar yeChannel (PC kunye neMac).
Iphepha elilandelayo lishwankathelo lwento oyikhupheleyo kwi-Chrome. Apha ufumana iinkcukacha malunga nokwandiswa kwe-Chrome, kunye nokuphononongwa ngabanye abasebenzisi. Emva kokuba ujikeleze macala onke, cofa u-Yongeza kwiqhosha le-Chrome kwikona ephezulu ngasekunene.
Kwiskrini esilandelayo, iwindow iyavela ukubuza (ngokuthobekileyo) Yongeza iStumbleUpon? Ukongezwa kubuza kakuhle kuba kufuna imvume yakho yokufikelela kwidatha yakho kuzo zonke iiwebhusayithi (kubandakanya yonke ithebhu / umsebenzi wokukhangela) ukuze usebenze njengoko bekucwangcisiwe. Qhubeka kwaye ucofe ukongeza.
Emva kokuba iStumbleBar ikhutshelwe, ithebhu entsha enephepha lokuNgena kwiStumbleUpon liyavula. Sayina ungene kwiStumbleUpon, usebenzisa igama lomsebenzisi / i-imeyile kunye negama lokugqitha olileleyo xa ubhalisela iakhawunti.
Emva kokuba ungene kwiakhawunti yakho, uyikhuphele ngempumelelo iStumbleBar yeChannel.
Uyifaka njani iStumbleBar yeFirefox
Ukubona ukuba izinto zingasebenza njani ukuba ukhetha iFirefox kwaye ukhetha iStumbleBar ekhethekileyo yeFirefox, yiya (uyiqikelele) Ukhuphelo lweStumbleUpon kwaye ucofe ukhuphelo lweKhonkco lokongeza phantsi kweStumbleBar yeFirefox (PC kunye neMac) isihloko.
Iphepha elilandelayo lishwankathelo lwento oyikhuphelayo kwiFirefox. Zive ukhululekile ukukhangela uphononongo lokufumana abanye ukuba bathathe uguqulelo lweFirefox lweStumbleBar. Emva kokuziqinisekisa ngexabiso lolwandiso, qhubeka kwaye ucofe u-Yongeza kwiqhosha leFirefox.
Kwiskrini esilandelayo, ibhokisi yencoko yababini elumkisayo ivela kunye nomyalezo Faka izongezo kuphela kubabhali obathembileyo. Sukuba nexhala, yeyona nto ibaluleke kakhulu kwiStumbleUpon ukuba ungosuleli izixhobo zakho ngesoftware enobungozi. Qhubeka kwaye ucofe ukufaka ngoku.
Emva kokuba iStumbleBar ikhutshiwe, ubona ibhokisi yencoko yababini ethi iStumbleUpon iya kufakwa emva kokuba uqalise kwakhona iFirefox. Qhubeka kwaye ucofe ukuqala kwakhona ngoku.
Emva kokuba iFirefox iqale kwakhona, ubona amanqaku amatsha phezulu kwisikhangeli sakho. Qiniseka ukuba ungena ngemvume ukuqala ukusebenzisa iStumbleBar ngokunqakraza kwiqhosha lokuNgena apho phezulu kwaye uchwetheze iinkcukacha zakho zokungena.
amagama olawulo lokuzalwa
Ingcambu yexhala le-valerian
Ubisi lwezibonelelo ze-magnesia
i-hypoglycaemia kwizifo ezingeswekile
Umahluko okhoyo kabini c ++